Raharaha ara-pitsaboana - Fantaro tsara kokoa ny zonao ara-dalàna! | Orinasa Mpampanoa lalàna
Tsy maintsy manaporofo ianao fa ny fahadisoana dia nanimba anao na nanimba ny trangan-javatra momba ny fanafoanana ny fandidiana na koa fitakiana ny tsy firaharahiana ara-pitsaboana.
Ny famongorana ara-pitsaboana dia rehefa dokotera na matihanina hafa manao zavatra iray izay mahatonga ratra amin'ny marary. Mila mpisolovava mpampihatra lalàna any Dubai ianao na mpisolovava mpitsara mpamono olona any UAE noho ny tsy fitandreman'ny hopitaly milaza fa manaporofo ny raharaham-pitsaranao ao amin'ny fitsarana, tsy maintsy manaporofo koa ianao fa nitranga ny ratra noho ny tsy fitandreman'ny dokotera. Io no antsoina hoe "sababation", midika hoe fahasimbana na fahavoazana nataonao na vokatry ny fahadisoan'ny dokotera.
“Isaky ny tsy mahay manao soa ny dokotera dia tsy maintsy arovana izy tsy hanao ratsy.” - Hippocrates
Ny lalàna manan-kery ara-pitsaboana amin'ny 16 desambra 2008 dia milaza mazava tsara ny fenitra ara-dalàna izay tokony arahin'ireo matihanina mpitsabo manerana ny United Arab Emirates. Araka ny lalànan'ny Medical Liability Law, ny andrim-pitsaboana rehetra any UAE dia voatery manana fiantohana mpitsabo. Misy ny olana ara-dalàna mifandraika amin'ny lalàna momba ny fitsaboana sy ny lalàna mifandraika amin'izany, izay misy ny adidy amin'ny hadisoana ara-pitsaboana, ny andraikitra tokony hoentin'ny mpitsabo, ny fahazoana antoka ny fitsaboana fiantohana ara-pitsaboana, ny fanadihadiana momba ny dokotera, ny dingana fanasaziana sy ny sazy mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fitsaboana sy ny lalàna mifehy azy.
Ny fandinihana vao haingana teo an-tsaha dia mampiseho fa ny fiarahamonina dia mihamalalaka hatrany amin'ny fametrahana ny fifamaliana eo amin'ny sehatra ara-pitsaboana amin'ny alàlan'ny lalàna UAE na Dubai. Izany rehetra izany dia isaorana ny fivoaran'ny lalàna sy ny lalàna mifototra amin'ny sehatra ara-pitsaboana any UAE.
Manana zo ara-dalàna ve ianao hametraka fitoriana na fanaratsiana ara-pitsaboana?
Araka ny lalàna UAW, ny fifandraisan'ny mpitsabo-marary dia jerena amin'ny resaka fifanarahana. Midika izany, ny andrim-panjakana / hopitaly omena na ny dokotera dia tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny fitsaboana takiana amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fepetra voatondro. Vokatr'izany, ireo fitakiana fanararaotana ara-pitsaboana dia raisina ho toy ny tranga fandikan-dalàna. Rehefa tonga any amin'ny dokotera, amin'ny toe-javatra toy izany, dia adidiny ny tompon'andraikitra feno amin'ny tsy fanomezana fikarakarana sy fikarakarana ny marary azy, na tsy manome ny habetsaky ny sampana fitsaboana ilaina izay omena ao anatin'ny toe-javatra omena. .
Raha jerena ny fomba fitaterana any UAE, ny fiheverana ny fanararaotana ara-pitsaboana sy ny tsy fitandreman'ny hopitaly dia azo jerena ihany koa noho ny “fihetsika miteraka fahavoazana” ho raisina ho fahavoazana.
Any mpisolovava manam-pahaizana momba ny fanararaotana fitsaboana ao UAE dia hilaza aminao fa araka ny andininy faha-14 voalaza ao amin'ny Lalàna momba ny fitsaboana ara-pitsaboana any UAE, ny teny hoe "hadisoan'ny mpitsabo" dia voafaritra ho hadisoana mitranga noho ny tsy fitandremana avy amin'ny anjaran'ny dokotera, na noho ny tsy fitandremana ny marary, na noho ny tsy fahampian'ny fahalalana matihanina.
Miorina amin'ny toe-java-misy, ireto singa tsy maintsy telo ireto dia tokony hotanterahina mba hahazoana fitakiana mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fitsaboana ara-pitsaboana any UAE. Ireto misy fepetra takiana voalaza:
Hadisoana ara-pitsaboana izay nahatonga fahavoazana ho an'ny mpitaky izany
Niatrika fahaverezam-bola vokatry ny fahavoazana ny tompon'antoka.
Eto dia tokony horesahina koa fa ny Code Code UAE dia milaza ny teoria amin'ny fomba fampijaliana manaraka: ny olona izay manao ratsy, dia tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka, na manao ahoana na fatiantoka manimba ny fananana na ratra manokana.
Raha ny resaka fitarainana miorim-paka dia misy ifandraisany amin'ny fahavoazana sy ny fahadisoana ary ny fifandraisan-javatra tsy ara-drariny eo amin'ny fahasimbana sy ny lesoka.
Ny fandinihana natao tao amin'ny kianjan'ny UAE dia mampiseho fa ny sehatra hafa dia miankina amin'ny olan'ny antony mahatonga ny any UAE. Vokatr'izany dia ireo mpisolovava mpahay lalàna sy mpisolovava mpitsikilo ara-pitsaboana any UAE dia matetika mahita fa ampy hanaporofoana ny fisian'ny fahasimbana sy ny fahadisoana.
Mitodika any amin'ny Fitsarana any UAE noho ny raharaha fitsaboana maloto anao
Raha toa ka mampifanaraka ny fitantanana an'i Etazonia, UK sy ny UAE isika dia ho hitantsika fa amin'ny tranga farany dia miatrika fomba fanararaotana kely kokoa isika. Tsy mitsaha-mitombo ireo mpisolovava momba ny tsy fanavotana ara-pitsaboana any UAE sy any Dubai, indrindra fa ny fironana bebe kokoa amin'ny fomba fiasa mifototra amin'ny làlana. Na izany aza, tokony holazaina fa ny lalàna UAE ankehitriny dia tsy manome fehezan-dalàna manokana hamaritana ny fahavoazana tokony homena ao anatin'ny toe-javatra nomena.
Rehefa voarohirohy momba ny tranga fanafoanana mpitsabo any UAE, dia tokony hojerenao ireto olana tena lehibe ireto. Voalohany indrindra, ny fitsarana UAE dia handray fanapahan-kevitra momba ny fahavoazana ara-pihetseham-po sy ara-nofo. Amin'ny tranga tahaka itony, miha sarotra ny olana mifandraika amin'ny fahavoazana fahavoazana, satria tsy misy fomba na paikady hentitra handinihana ny fahavoazana. Eto, tokony ho fantatrao tsara fa ny fitsarana UAE dia tsy hampihatra fomba fiasa amin'ny fahaverezan'ny karamanao, na dia hitaky azy ireo ianao noho ny vinavina mivaingana. Amin'ny lafiny iray koa, tokony ho fantatrao koa ny Fitsarana any UAE dia haneho fihetsika feno halala-tanana kokoa amin'ny fanakanana ny fianakaviana lehibe eo ambany.
Soa ihany fa efa nitombo tato anatin'ny taona faramparany ny vola nomena an'ireo nangatahana momba ny tratran'ny ratra manokana. Raha te hahafantatra bebe kokoa, tamin'ny 2012, ny Fitsarana Abu Dhabi dia nanolotra AED 7 tapitrisa rehefa nandinika raharaha iray miresaka momba ny fahavoazan'ny atidoha zaza nateraky ny fitomboan'ny fitiliana. Aza adino, ny fitsarana UAE dia afaka mandidy ihany koa ny vola raisina (200.000 AED) sy ny fandoavam-bola mifanaraka amin'izany.
Misafidy Filma iray voafaritra ao amin'ny litorzika ara-pitsaboana sy fiantohana amin'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana
Mba hanohizantsika ny fifanakalozan-dresaka dia tokony hifantoka amin'ireo antony ireo ihany koa isika, izay mitarika ny andraikitra ara-dalàna tokony ho raisin'ireo matihanina mpitsabo ao anatin'ny toe-javatra sasany. Izay mpisolovava manan-talenta malaza any Dubai dia hitondra ireto antony manaraka ireto:
Ny tsy fahampian'ny fitsaboana
Fitsaboana na fanafody diso
Ny alahelo ara-tsaina nahatonga ny marary
Fahadisoana, tsy fetezana na tsy niraharaha momba ny fitsaboana na fandidiana
Raha ny fiantohana ara-pahasalamana momba ny fitsaboana dia mirakitra ireto teboka manaraka ireto:
Fandaniam-bola miady amin'ny matihanina amin'ny dokotera, anisan'izany ny saram-pitsarana, fiampangana fitsarana, sy ny sisa.
Ny fatiantoka ara-dalàna mifandraika amin'ny onitra noho ny fahafatesan'ny vatana na ny ratra / ara-batana ny marary nateraky ny fahadisoana, ny tsy fihoarana na ny tsy firaharahiana raha manome serivisy matihanina.
Zava-dehibe ihany koa ny hahafantatra na firehana lalàna momba ny fanitsakitsahana na mpisolovava amin'ny raharaha ara-pitsaboana dia azo ampiharina aminao na ho an'ny raharahao. Amin'izany, alao tsara ny lisitra eto ambany raha te hahita ny valin'ny fanontanianao:
Dokotera, anisan'izany ny mpitsabo, ny dokotera ary ny matihanina ambiny amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Staff paramedical, anisan'izany ireo mpitsabo mpanampy, X-ray na teknisianina lab, pharmacist, physiotherapist, ary ny sisa.
Ireo toeram-pitsaboana, anisan'izany ny hopitaly, klinika, foibe diagnostika, laboratoara, sy ny sisa.
Inona no fantatrao momba ny Arbitration DIAC?
Nitsangana ny DIAC na ny Dubai International Arbitration Center tamin'ny 7 Mey 2007. Nantsoina ity ivontoerana ity mba handinihana ireo fifamaliana natolotra mifanaraka amin'ny Fitsipika DAIC.
Rehefa manomboka mifamaly, ireto dingana manaraka ireto dia tokony ho alaina amin'ny fomba rehetra:
Ny fangatahana fifampiraharahana, ao anatin'izany:
Fangatahana hanondroana ny fifampiraharahana eo ambanin'ny Lalànan'ny DIAC.
Ny anarana feno, ny famaritana, ny adiresy, ny laharana an-tariby sy ny mailaka, ny adiresy mailaka, ary ny fampahalalana momba ny fifandraisana hafa misy.
Ny kopin'ny fifanarahana fifampiraharahana nataon'ny mpangataka, ny kopian-taratasy momba ny fifanarahana, izay mirakitra ny fifanarahana voalaza.
Famaritana fohifohy, milaza ny toe-javatra sy ny toetry ny fifandirana, izay nahatonga ny fitakiana voalaza.
Fanambarana mialoha mifandraika amin'ny fanampiana tadiavina, araka izay azo atao, ary manondro ny sandan'ny fitakiana.
Alefa any amin'ny DIAC ny fangatahana amin'ny isan'ireo kopia takiana. Ny tompon'antoka dia handoa ny saram-pisoratana anarana aorian'izay dia handefa kopia ny fangatahana ny ivontoerana ary ireo antontan-taratasy anisany amin'ny mpamaly.
Aza misalasala mitodika azy ny orinasam-dalàna tsara dia manam-pahaizana manokana momba ny fitsidihana ara-pitsaboana ary safidio ny tsy fitandremana ara-pitsaboana ataon'ny matihanina izay milaza fa mpisolovava ianao mba hamaha ny olana ara-pahasalamanao amin'ny fomba tsara indrindra.
Tsy maintsy mankany amin'ny The Dubai Healthcare City Authority aloha ianao, amin'ny tranga tsy fitandremana, ny traboina dia afaka mandefa fitoriana any amin'ny The Dubai Healthcare City Authority (DHCA)
. Ireo dokotera maloto avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny tsy fananana andraikitra raha toa ka tsy manan-kery amin'ny fitrandrahana, dia tsy azo atao ny mandà tsy handray fanafody.
. Dосtоrѕ dia tsy ho lіаblе fоr рrоѕесutіоn raha manaraka ny fenitra izy ireo, araka ny fitsipi-pitondran-tena, araka ny fitsipi-pitondran-tena.
. Ny dokotera koa dia tsy ho tafiditra ao amin'ny kaonty raha toa ka effectstаndаrd оr unеxресtеd lafiny vokarina avy eo azo соmрlісаtіоnѕ оссur, fa tsy ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fitsaboana mаlрrасtісе.
. Voararan'ny dokotera amin'ny marary trеаtіng nefa tsy eken'izy ireo raha tsy misy ny faneken'izy ireo raha tsy izany.
. Dосtоrѕ dia tsy fomban-dravina fa tsy ny tsiambaratelo, na izany aza, raha tsy manam-pahalalana, na iza na iza, dia omena azy ireo na ny vadin'izy ireo.
. Dосtоrѕ аrе аlѕо реrmіttеd tо ​​hizara tsiambaratelo raha tokony hiaro ny heloka bevava izy ireo na hanohitra ny fitsarana ambony na tsia.
. Ny Dingana miaraka amin'ny UAE dia manana ihany koa eo ambanin'ny fehezan-dalàna UAE Penal (Fеdеrаl Lаw Nо. 3 af 1987) Izany dia fehezin'ny fehezanteny an-tsoratra ao anaty fehezanteny iray izay azo antoka fa ny manam-pahaizana no nanohana azy io.
. Ny dokotera ao UAE dia izany no ahazoana aina be kokoa rehefa trеаtіng раtіеntѕ, raha tsy maintsy miantoka azy ireo ny fahaizana sy ny fahaiza-manao. Raha tsy izany, dia tokony hanao izany mifanaraka amin'ny fomba fanao sy ny fitsipiky ny fomban-drazana izy ireo, mba hahitana ny vokatry ny bеіng fоund lіаblе ho an'ny mеdісаl mаlрrасtі Ary farany, ny fatra-pahatongan'ny lеgаl sy ny fomba fiasa ara-pitsaboana ambony indrindra ary ny fomba amam-pitsipika ambony indrindra no miasa.
Ahoana ny fomba hametrahana fitarainana amin'ny matihanina ara-pahasalamana?
Ahoana ny fomba hametrahana fitarainana amin'ny tobim-pitsaboana?
Inona avy ny zo sy andraikitra amin'ny marary ao Dubai?
Mifandraisa aminay noho ny raharaha tsy miraharaha momba ny fitsaboana
Eritreritra 6 momba ny “Raharaha momba ny tsy fitandremana ara-pahasalamana - fantaro tsara kokoa ny zonareo ara-dalàna!”
10/21/2014 amin'ny 8:20 maraina
Amin'izao fotoana izao aho dia nametraka orinasa fitantanana fitondran-tena sy orinasa mpanelanelana ara-batana ao UAE.
Mino aho fa miasa amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy fanabeazana miaraka amin'ny ankizy sy ny tanora ao amin'ny UAE fa misy tranga miharihary izay ahitan'ny tsirairay ny faharatrana manokana noho ny fitsaboana ara-pahasalamana / ny fanabeazana ara-batana amin'ny olona ara-batana amin'ny fomba diso ka mahatonga azy ireo hanimba ny vatana.
Manontany tena aho raha mahita ny raharaha toy izao ny orinasanao ary amin'ny salan'isa hoe firy ny raharaha natolotry ny orinasa sy ny mpitsabo momba ny ratra manokana toy izany no nanala ny soroka, ny sandry tapaka sns.
07/21/2015 amin'ny 5:46 maraina
nahazo famindrana volo avy tany amin'ny klinika iray tao dubai tamin'ny 22/02 / 15.its efa mihoatra ny 5 volana aho ary very volo bebe kokoa taorian'ny famindrana azy avy tany amiko .Ny volo noheverina ho maniry ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 4 volana ary mbola tsy nahita fivoarana volo vaovao na.dating ny fitsaboana amin'ny 6 ka hatramin'ny 7 ora ny dr no nandraisana fepetra voalohany nandritra ny 2 ora nefa avy eo dia lasa izy ary mpitsabo 2 ihany no tao no nahavita ny fombafomba izay tsy voamarina dr na mahay ampy ho an'ny fomba fiasa amin'ity sehatra ity.Dia manana paty somary mihosina eo an-dohako aho ary nihalehibe ny voloko, efa nahatratra volo bebe kokoa aho avy eo talohan'ny prosedur.it dia noho ny tsy fitandremana na ny tsy fanajanonana mpitsabo azy ireo izay efa nandalovako ny vatana ary trauma ara-tsaina.can nametraka fitoriana ara-pitsarana momba ity raharaha ity.
10/19/2016 amin'ny 5:08 PM
Ahoana no hahafantarana raha tranga sivily na heloka bevava ny raharaha tsy fitandremana ara-pahasalamana? Satria mangataka any ivelany aho ary misy fanontaniana fa manana tantara ratsy ve ianao? Nandeha tany amin'ny biraon'ny polisy aho mba hangataka firaketana taminao hoy izy ireo tamiko fa ao amin'ny rafitr'izy ireo dia manana tranga aho saingy efa milamina io. Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao
10/30/2017 amin'ny 6:38 maraina
Dokotera mpandalina aho ary mila fanohanana ara-dalàna hanandrana tranga iray izay tsy misy antony ara-pitsaboana nefa tsy fantatra mazava fa nihalehibe ny raharaha.
08/31/2018 amin'ny 6:46 PM
Tiako ny nolazainao momba ny fomba ahafahanao manakarama mpisolovava voaroaka raha manana olana amin'ny fikarakarana anao. Ny rahalahiko za-draharaha dia mieritreritra ny hanakarama mpisolovava izany ato ho ato. Misaotra anao noho ny fampahalalana momba ny fomba vitany izany raha manana porofon'ny fisianana izy, tsy fahampian'ny fitsaboana, ary fitsaboana ratsy na fanafody.